10 donne nella Bibbia che hanno superato le aspettative | PREGHIERA&NEWS
Mụ nwanyị 10 n'ime Akwụkwọ Nsọ ndị karịrị atụmanya
Paolo Tescione	Edere ya Septemba 7, 2020
Anyị nwere ike iche gbasara ụmụnwanyị n'ime Akwụkwọ Nsọ dịka Meri, Iv, Sera, Miriam, Esta, Rut, Neomi, Debora na Meri Magdalin. Ma, e nwere ndị nke ọzọ dị obere na Baịbụl, ụfọdụ nwere naanị otu amaokwu.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụmụ nwanyị nọ na Bible bụ ụmụ nwanyị siri ike na ndị tozuru oke, ụmụ nwanyị a echeghị na onye ọzọ ga-arụ ọrụ ahụ. Ha tụrụ egwu Chineke ma dịrị ndụ n'ikwesị ntụkwasị obi. Ha mere ihe ha kwesiri ime.
Chineke nyere ụmụnwanyị niile ike ka ha gbasie ike ma sorokwa ọkpụkpọ oku ya, o jikwa omume ụmụ nwanyị a wee gbaa anyị ume ma kuziere anyị ọtụtụ afọ ma emechaa site na akwụkwọ nsọ.
Ndị a bụ ihe atụ iri nke ụmụ nwanyị nkịtị n’ime Akwụkwọ Nsọ ndị gosipụtara ike dị ukwuu na okwukwe.
1. Shiphrah na 2. Puah
Eze Ijipt nyere iwu ka ụmụ nwanyị abụọ na-ele ime bụ́ ndị Juu, Shifra na Pua, gbuo ụmụ nwoke niile ndị Juu mgbe a mụrụ ha. N’Ọpụpụ 1, anyị gụrụ na ndị inyom na-ele ime na-atụ egwu Chineke ma ghara ime ihe eze gwara ha ka ha mee. Kama ha gha ụgha ma kwuo na amụrụ ụmụaka ahụ tupu ha abịarute. Nnupụisi a e mere na mbụ zọrọ ndụ ọtụtụ ụmụaka. Womenmụ nwanyị a bụ ezigbo ihe atụ nke otu anyị nwere ike isi guzogide ọchịchị ọjọọ.
Shiphrah na Puah na Bible - Ọpụpụ 1: 17-20
Ma Sifra na Pua buuru Chineke, ma ha meghi ihe eze Ijipt gwara ha. Ha hapụrụ ụmụ nwoke ahụ ka ha dịrị ndụ. Eze Ijipt wee ziga ka a kpọta ndị inyom. Ọ jụrụ ha, sị, “Gịnị kpatara ụnụ mere? Gịnị mere i ji hapụ ụmụ nwoke ahụ ka ha dịrị ndụ? “Iban emi ẹbọrọ Pharaoh:” Iban Jew iketiehe nte iban Egypt. Ha siri ike. Ha nwere ụmụ ha tupu anyị erute. “Ya mere, Chineke meere Sifra na Pua ebere. Na Israelni biara nni hɔ a obesi n’ananmu. Shiphrah na Puah nwere nsọpụrụ n’ebe Chineke nọ, o wee nye ha ezinụlọ dị iche iche ”.
Otú ha si karịa ihe ha tụrụ anya ya: womenmụ nwanyị a na-atụ egwu Chineke karịa fero a na-enweghị aha na Ọpụpụ nke nwere ike igbu ha n'ụzọ dị mfe. Ha ghọtara ịdị nsọ nke ndụ ma mara na ihe ha mere n'anya Chineke kasị mkpa. Womenmụ nwanyị ndị a chere mkpebi siri ike ihu, ịgbaso Fero ọhụrụ a ma ọ bụ iji ghọrọ ihe ga-esi na ya pụta. Ekwesịrị ịtụ anya na ha ga-ekwenyere iwu Fero iji hụ na nchekwa ha, mana ha jidesiri nkwenkwe ha ike ma jụ igbu ụmụaka ndị Juu.
Tamar kyerɛkyerɛɛ mu sɛ na ne papa a ofi Yuda no de ne ho ahyɛ nnubɔnenom ne asaw mu bere a na ɔda afiase no. Enye ama enyịme ndidọ ekperedem eyen esie, edi enye ikanamke se enye ọkọn̄wọn̄ọde. Tema we yikwasi uwe-nwayi, bakuru nna nwunye-ya, (ọ mataghi ya), turu ime nwa-nwoke n'aka-ya.
Taa ọ dị anyị n’anya n’anya, mana na omenaala ahụ Tamar nwere nsọpụrụ karịa Judas, n’ihi na o mere ihe dị mkpa iji mee ka usoro ezinaụlọ ahụ, usoro a ga-eduga na Jizọs, a na-ahụ akụkọ ya n’etiti akụkọ Josef na Jenesis 38 .
Tema n'ime Akwụkwọ Nsọ - Jenesis 38: 1-30
“N’oge ahụ, Judas gakwuuru ụmụnne ya wee tụgharịa gakwuru otu onye Adullam, onye aha ya bụ Hira. N’ebe ahụ, Judas hụrụ ada otu onye Kenan aha ya bụ Shua. O we kuru ya, bakuru ya, we turu ime, mua nwa-nwoke, kpọ aha-ya Ia. Ọ turu ime ọzọ, mua nwa-nwoke, kpọ aha-ya Onan. Ọ mụrụ nwa nwoke ọzọ, gụọ ya Shila. Judas nọ na Chezib mgbe ọ mụrụ ya ... "
Otú o si karịa ihe ndị mmadụ tụrụ anya ya: Ndị mmadụ gaara atụ anya na Tamar ga-anabata mmeri, kama ọ gbachitere onwe ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ bụ ihe adịghị mma ịme ya, ọ na-asọpụrụ nna nwunye ya ma na-aga n'ihu na usoro ezinụlọ. Mgbe ọ matara ihe merenụ, Juda ghọtara ihe mere o ji mee ka nwa ya nke nta ghara ịhapụ Tema. Nghọta ya gosipụtara na ọ bụghị naanị na omume Tamar gosipụtara omume adịghị mma, kamakwa o gosipụtara akara mgbanwe na ndụ ya. Nwa nwoke nke Tamar bụ Perez bụ nna ochie nke usoro ndị eze Devid nke a kpọtụrụ aha na Rut 4: 18-22.
Rehab bụ nwaanyị akwụna na Jeriko. Mgbe ndị nledo abụọ batara n'ihi ụmụ Izrel bịara n'ụlọ ya, ọ na-echebe ha ma na-ahapụ ha n'abalị ahụ. Mgbe eze Jeriko nyere ya iwu ka o nyefee ha, nwanyị a ghaara ya ụgha na-ekwu na ha apụla, mana n'eziokwu o zoro ha n'elu ụlọ ya.
Rehab tụrụ egwu Chineke nke ndị ọzọ, ghaara eze ya nke ụwa ụgha ma nyere usuu ndị agha na-awakpo ya aka. E kwuru ya na Joshua 2, 6: 22-25; Hib. 11:31; Jemes 2:25; ndien ke Matt. 1: 5 tinyere Rut na Meri na usoro ọmụmụ Kraịst.
Rahab n'ime Bible - Joshua 2
Eze Jeriko we zigara Rehab ozi, si, Me ka ha puta, bú ndikom bakutere gi, ha bara n'ulo-gi, n'ihi na ọ bu ileputa ala nka nile ka ha biaworo. Nwanyi ahu kuru ndikom abua ahu zobe ha… Tupu ndi nledo ahu edina ala abali ahu, o rigoro n’elu ulo wee si ha, “Ama m na Onye-nwe enyewo unu ala a, na egwu nke unu adakwasila nke ukwuu. anyị, nke mere na ndị niile bi na mba a na-agbaze n'ụjọ n'ihi unu ... Mgbe anyị nụrụ ya, obi anyị gbazee maka egwu na obi ike onye ọ bụla dara n'ihi gị, n'ihi na Onye-nwe-ayi Chineke-gi bu Chineke n’elu-igwe di n’elu na n’elu uwa di n’okpuru. Ma ub thenu a, biko, werenu Onye-nwe-ayi meuaram iyi, na I g showmere ulom ebere, n'ihi na emerewom gi ebere. Nyem ihe-iriba-ama doro anya na i g sparedebe ndu nnam na nnem,
Otú O Si Mee Ihe Extụghị Anya Ya: Eze Jeriko agaraghị atụ anya na nwanyị akwụna ga-emeri ya ma chebe ndị nledo Izrel. Ọ bụ ezie na Rehab enweghị ọrụ ịja mma kasị mma, ọ maara ihe ma ghọta na Chineke nke ndị Izrel bụ nanị Chineke! O ziri ezi na-atụ egwu Chineke ma bụrụ ezigbo enyi nke ndị ikom chịrị obodo ya. Ihe ọ bụla i chere gbasara ndị akwụna, nwanyị a nke abalị chebere ụbọchị!
Mgbe eze nwanyị ahụ, bụ́ Atalia, chọpụtara na nwa ya nwoke, bụ́ Eze Ehazaịa anwụwo, o gburu ndị ezinụlọ eze nile iji kwadoo ọkwá ya dị ka eze nwanyị nke Juda. Nwanne nwanyị eze, Ioseba, napụtara nwa nwanne ya nwoke, bụ Prince Joash, na ọ bụ naanị onye lanarịrị mgbuchapụ ahụ. Afọ asaa ka nke ahụ gasịrị, di ya, bụ́ Jehoiada, onye bụ onye ụkọchukwu, weghachiri Joason nwa ọhụrụ ocheeze.
Ọ bụ n'ihi obi ike Jọshụa nwere n'ịgwa nwanne mama ya na e chebere usoro ndị eze nke Devid. A kpọrọ Jehosheba na 2 Ndị Eze 11: 2-3 na 2 Ihe E Mere 22, bụ ebe e dekọrọ aha ya Jehoshabeath.
Jehoshabeath n'ime Akwụkwọ Nsọ - 2 Ndị Eze 11: 2-3
Ma Jehosheba, nwa-nwayi eze, bú Jehoram, nwa-nne-nwayi Ehazaia, we kuru Joas nwa Ehazaia, me ka ọ puta je n'etiti ndi-isi ala, ndi ha gaje ib muru. O tiyere ya na nwayi nyere ya ara n’ime ime-ulo ka ha we ghara n’ebe Atalaia nọ; ya mere e egbughị ya. Ya na nọọsụ ya nọrọ n'ụlọ nsọ nke Ebighị Ebi ruo afọ isii, ebe Atalia na-achị mba ahụ ".
Otú o si gabiga ihe a tụrụ anya ya: Atalaịa bụ nwanyị nọ na njem ma ọ tụghị anya ya! Josabea de ne nkwa too asiane mu maa Prince Joash ne ne nnamfo. Ọ bụrụ na ejide ya, a ga-egbu ya maka ọrụ ọma ya. Ioseba na egosiputara anyi na obi ike abughi nani mmeko nwoke na nwanyi. Wouldnye gaara eche na nwanyị nke yiri ihe nkịtị ga-azọpụta agbụrụ ndị eze nke Devid site na mbibi site n'ịhụnanya.
* Akụkụ dị mwute n’akụkọ a bụ na ka e mesịrị, mgbe Jehoiada nwụsịrị (ma eleghị anya Josabea), Eze Joash echetaghị obiọma ha ma gbuo nwa ha nwoke, bụ́ Zekaraịa onye amụma.
Mgbe onye nchụ-aja Hilkịa chọtara otu akwụkwọ nke Iwu ahụ n’oge ịrụ-arụgharị n’ụlọ nsọ nke Solomon, Hulda kwupụtara n’amụma na akwụkwọ ha chọtara bụ eziokwu nke Dinwenu. O bukwara amụma mbibi, dịka ndị mmadụ esoghị ntuzi aka akwụkwọ ahụ. Otú ọ dị, o mechiri site n'imesi Eze Josaịa obi ike na ọ gaghị ahụ mbibi n'ihi nchegharị ya.
Hulda lụrụ nwanyị ma ọ bụ nwanyị amụma zuru ezu. Chineke ji ya kwuo na ihe odide ndị a chọtara bụ eziokwu Akwụkwọ Nsọ. Nwere ike ịhụ ya ebe a kpọtụrụ aha na 2 Ndị Eze 22 na ọzọ na 2 Ihe E Mere 34: 22-28.
Hulda na Bible - 2 Ndi Eze 22:14
Hilkia, bú onye-nchu-àjà, na Ahaikam, na Akbor, na Shafan, na Asaia, we soro Hulda, bú onye-amuma, gwa nwunye Shalum nwa Tikva, nwa Harhas, onye n ofdebe uwe ndi-nchu-àjà, okwu. O bi na Jerusalem, na ebe ọhụụ ọhụrụ “.
Otú O Si Karịa Ihe Ndị A Tụrụ Anya Ya: Hulda bụ naanị onye amụma nwaanyị n'Akwụkwọ Ndị Eze. Mgbe Eze Josaya nwere ajụjụ banyere akwụkwọ Iwu ahụ a chọtara, onye nchụàjà ya, odeakwụkwọ ya na onye na-ejere ya ozi gara Hulda ka o mee ka Okwu Chineke dokwuo anya. Ha tụkwasịrị obi na Hulda ga-ebu amụma n'eziokwu; ọ gbasaghị ya na ọ bụ onye amụma nwanyị.
Lidia so ná ndị mbụ ghọrọ Ndị Kraịst. N’Ọrụ Ndịozi 16: 14-15, a kọwara ya dịka onye na-efe Chineke na nwanyị na-azụ ahịa nke nwere ezinụlọ. Onye-nwe meghere obi ya ma e mere ya na ndị ezi-na-ụlọ ya niile baptism. O megheere Pọl na ndị ibe ya ụlọ ya, lere ndị ozi ala ọzọ ahụ ọbịa.
Lydia na akwukwo nso - Olu 16: 14-15
“Otu nwanyị aha ya bụ Lidia, onye na-efe Chineke, nọ na-ege anyị ntị; bụ onye obodo Taịataịra, onye ahịa na-acha odo odo. Onyenwe anyị meghere obi ya iji ịnụ ọkụ n'obi na-ege ntị n'ihe Pọl na-ekwu. Mgbe e mere ya na ezi na ụlọ ya baptism, ọ gbara anyị ume, na-asị, "Ọ bụrụ na unu ewere m na m kwesịrị ntụkwasị obi nye Onyenwe anyị, bịanụ nọrọ n'ụlọ m." O wee merie anyị “.
Otú o siri gafee ihe a tụrụ anya ya: Lydia so na otu ndị gbakọtara maka ikpere n’akụkụ mmiri; ha enweghị ụlọ nzukọ, dịka ụlọ nzukọ ahụ chọrọ ma ọ dịkarịa ala ụmụ nwoke Juu iri. Ebe ọ bụ na ọ na-ere ákwà na-acha odo odo, ọ ga-abụ ọgaranya; n'agbanyeghị nke ahụ, o wedara onwe ya ala site n'ịhụ ndị ọzọ ọbịa. Luk kpọrọ aha Lydia, na-ekwusi ike mkpa ọ dị n'akụkọ ihe mere eme a.
Priscilla, nke a makwaara dị ka Prisca, bụ nwanyị onye Juu si Rome ghọrọ onye Kristian. Fọdụ nwere ike ịkọwa na a na-akpọ ya aha mgbe niile na di ya na ọ bụghị naanị ya. Otu osinadị, a na-egosi ha dịka onye ha n’otu n’otu n’ime Kraịst, a na-echeta ha abụọ ọnụ dịka ndị ndu ụka mbụ.
Priscilla n'ime Akwụkwọ Nsọ - Ndị Rom 16: 3-4
“Keleenụ Priska na Akwịla, ndị mụ na ha na-arụ ọrụ n’ime Kraịst Jizọs, ndị tinyere ndụ ha n’ihe ize ndụ maka ndụ m, ndị m na-enyeghị ekele naanị, kamakwa ụka nile nke ndị ọgọ mmụọ”. Pricilla na Akwila bụ ndị na-eme ụlọ ntu dịka Pọl (Ọrụ 18: 3).
Luk gwakwara anyị n’Ọlụ 18 na mgbe Apọlọs malitere ịgwa Efesọs na ọ bụ Prisila na Akwịla jikọrọ ya dọpụta ya ma kọwaa God'szọ Chineke n’ụzọ ziri ezi.
Otú O Si Karịa Ihe Ndị A Tụrụ Anya Ya: Priscilla bụ otu ihe atụ nke otu di na nwunye nwere ike isi nwee njikọ ha nhata n'ọrụ ha maka Onyenwe anyị A maara ya na ọ dị mkpa nye di ya, ma Chineke ma ụka mbụ. N’ebe a anyị hụrụ ọgbakọ izizi na-asọpụrụ ndị di na nwunye ndị na-arụkọ ọrụ ọnụ dịka ndị nkuzi na-enye aka maka ozi-ọma.
Phoebe bụ onye dikọn nke jere ozi na ndị nlekọta / ndị okenye ụka. Enye ama an̄wam Paul ye ediwak owo eken ke utom Ọbọn̄. E nweghị aha di ya, ma ọ bụrụ na o nwere otu.
Phobe na Bible - Na Ndị Rom 16: 1-2
“Ekelere m gị nwanne anyị nwanyị bụ Fibi, onye dikọn nke ụka dị na Senkrea, ka unu wee nabata ya n’ime Onyenwe anyị dịka o kwesiri ndị nsọ, ma nyere ya aka n’ihe ọ bụla ọ chọrọ n’aka gị, n’ihi na ọ bụ onye na-emere ọtụtụ ndị ebere na kwa nke m. "
Otú O Si Gafee Anya: Womenmụ nwanyị enwetaghị ọrụ iduzi ngwa ngwa n'oge a, ebe ụmụ nwanyị anaghị ewere dị ka ndị a pụrụ ịtụkwasị obi na omenaala. Nhọpụta ya dị ka odibo / diacon na-egosi obi ike nke ndị ndu ụka mbụ nyere ya.
10. Womenmụ nwanyị hụrụ mbilite n'ọnwụ Kraịst
N’oge Kraịst, a naghị ekwe ka ụmụ nwanyị bụrụ ndị akaebe n’ụzọ iwu. Ewereghị akaebe ha kwere na ya. Otu o di, o bu ndi nwanyi ka edere n’Ozioma dika ndi izizi huru Kraist ahu emere ka O si n’onwu bilie ma gwa ya ndi ozo n’eso uzo ya.
Ihe ndekọ dị iche iche dịka ozi ọma si dị, ebe Meri Magdalin bụ onye izizi gbara ama banyere Jizọs ahụ akpọlitere n'ọnwụ n'ozi ọma anọ ahụ niile, ozioma Luk na Matiu gụnyekwara ụmụ nwanyị ndị ọzọ dị ka ndị akaebe. Matthew 28: 1 esịne “Mary enye eken,” edi Luke 24:10 esịne Joanna, Mary, eka James, ye iban eken.
Otú Ha Si Karịa Ihe :tụ Anya Ha: E dekọrọ ụmụ nwanyị ndị a n’akụkọ ihe mere eme dị ka ndị akaebe a pụrụ ịtụkwasị obi, n’oge ọ bụ nanị ụmụ nwoke ka a tụkwasịrị obi. Akụkọ a agbagwojuwo ọtụtụ ndị anya kemgbe ọtụtụ afọ ndị chere na ọ bụ ndị na-eso ụzọ Jizọs chepụtara ihe ndekọ banyere mbilite n'ọnwụ.
Echiche ikpeazụ ...
E nwere ọtụtụ ụmụnwaanyị siri ike n’ime Akwụkwọ Nsọ ndị tụkwasịrị Chineke obi karịa onwe ha. Somefọdụ ghagha ụgha iji chekwaa ndị ọzọ na ndị ọzọ emebila ọdịnala iji mee ihe ziri ezi. E dekọrọ omume ha, nke Chineke na-eduzi, n'ime Bible ka mmadụ nile gụọ ma kpalie ha.
Nke gara aga Post Gara aga post:Izopụrụ ndị mmụọ ozi nke ụlọ mmadụ anya
Next Post → Post ozo:Na-egosi taa n'eziokwu na nne Meri bụ nne gị